ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားတဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Urban Decay ရဲ့ Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားတဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Urban Decay ရဲ့ Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss!
ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားတဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Urban Decay ရဲ့ Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss!
တချို့သော Cosmetic Products တွေဟာ Maket ထဲမှာရှိပြီးသား သုံးစွဲသူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသာဖြစ်တဲ့ Product တွေကိုထုတ်လုပ်လေ့သာရှိပေမယ့် Urban Decay ဟာ သုံးစွဲသူတွေ တကြိမ်မှမကြုံဖူး မခံစားဖူးသေးတဲ့ Product အသစ်အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယခုအခါမှာလည်း အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့ တကယ်ပဲ အတွေ့အကြုံအသစ်ကိုခံစားမှုပေးနိုင်မယ့် Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Glow ကိုချပြလိုက်ပါပြီ။
ဗီတာမင် အီး, Peppermint Oil တို့နဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားအတွက် လိုအပ်သော ရေဓာတ်များကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတစုံကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ လှပတဲ့ အရောင်အဆင်းတွေသာမက Mint flavor လေးဖြစ်တာကြောင့် သူမတူတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။ တောက်ပဆန်းသစ်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်ရုံသာမဟုတ်ပဲ Metallic, Holographic, Cream နဲ့ Sheer Cream ဆိုပြီး လေးမျိုးလေးစားထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Finish မျိုးကို ရွေးချယ်လို့လည်းရတာပေါ့။ Sexy Lip လေးကို အချိန်ကြာရှည်စွာ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အပြင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကောင်းမွန်တာကြောင့် စေးထိုင်းထိုင်းမဖြစ်ပဲ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။
ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ဘူးသဏ္ဍာန်ကလည်း နှစ်ဖက်မြင်ကြည်လင်တဲ့အသွင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး သယ်ယူရလွယ်ကူအောင်လည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းစုတ်တံလေးကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတာကြောင့် အလွန်အကျွံ Gloss တွေပါလာခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပဲ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်တိတိကျကျလိုသလို ဆွဲနိုင်အောင်လည်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၂၀ ရှိပြီး ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် Usa-Myanmar Branded Sale, iShoppe Myanmar Facebook Page တွေမှာ အလွယ်တကူ မှာယူနိုင်ကြောင်းဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Image Source : www.urbandecay.com
Firming Treatment အတွက် Sparkly Shades သုံးရောင်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ My Little Pony Glitter Mask!